ट्याक्सी भित्रै निदाइन यी मोडल, सुनसान ठाउँमा लागि ट्याक्सी चालकले यस्तो हर्कत गरे जुन हर्कतले जीवनभर पछुतो बनायो ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/ट्याक्सी भित्रै निदाइन यी मोडल, सुनसान ठाउँमा लागि ट्याक्सी चालकले यस्तो हर्कत गरे जुन हर्कतले जीवनभर पछुतो बनायो !
एजेन्सी । एक ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो ट्याक्सीको किस्ता बुझाउन नसकेर पैसाका लागि एक मोडलको ज्यान लिएका छन् । ति मोडल पैसावाल भएको सुइको पाएका ट्याक्सी चालकले उनको ज्यान लिएका हुन् । घटना नेपालको भने होइन । भारतको बेंगलुरुमा भएको घटनाले सुरक्षा चुनौतीवारे अवगत गराएको छ । तीन हप्ता अघि ३२ वर्षीया मोडल एवं इभेन्ट म्यानेजरले ज्यान गुमाउनु परेको हो । २२ वर्षका ट्याक्सी ड्राइभर नागेशले उनको ज्यान लिएका थिए । कर्नाटकका उनी ट्याक्सीको दुई किस्ता रकम बुझाउन नसकेर समस्यामा थिए । उनले त्यही बेलामा ति युवतीलाई भेटाए ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
द न्यू इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको एक खबर अनुसार पूजा कोलकातामा बस्थिन् । उनी मोडलिङका साथै फ्रिलान्सिङ इभेन्टकी म्यानेजरका रुपाम पनि कार्यरत थिइन् । उनी ३० जुलाईमा कुनै कार्यक्रमका लागि बेंगलुरु गएको बेलामा यस्तो घटना भएको हो । आफ्नो घर अर्थात् कोलकाता फर्कनका लागि उनले विमानस्थल सम्म पुर्याउन उक्त टयाक्सी प्रयोग गरेकी थिइन् । पूजाले ३० जुलाई दिउँसो एक होटलमा जानका लागि नागेशको ट्याक्सी बुक गरिन् उनी होटलमा पुगेपछि भोलीपल्ट घर फर्कने र विमानस्थल सम्म पनि पुर्याइदिन आग्रह गरिन् । उनको आग्रह ट्याक्सी चालकले माने । जब दोस्रो दिन विमानस्थल पुर्याउन भन्दै उनी होटलमा पुजालाई लिन गए उनले अपराधिक योजना बनाए ।
पूजा गाडीमा निदाइन् । जब नागेशले उनी सुतिरहेको देखे तब गाडीलाई सुनसान ठाउँतर्फ लगेर उनीसंग भएको धनमाल लुट्न टाउकोमा ज्याक रडले हाने । पुजा बेहोस भएर लडेपछि उनीसंग भएको रकम लुटेर भाग्नै खोज्दा पुजा ब्युझिएर हल्ला गर्न लागेपछि उनले फेरी हमला गरेर ज्यान लिए ।
पुलिसका अनुसार पूजाको शरीर बेंगलुरुको केम्पेगोडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट नजिकै फिल्डमा भेटिएको अवस्थामा स्थानियले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। पूजाको अनुहार चिन्नै नसकिने भएकाले उनले लगाएको लुगाबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । डेकन हेराल्डमा छापिएको खबर अनुसार कोलकाताको न्यू टाउन पुलिस स्टेशनमा पूजा हराएको रिपोर्ट दर्ता गरिएको थियो जो उनका श्रीमान् सुदिपले दर्ता गराएका थिए । पुलिसले उनलाई भेटेपछि घटनाबारे सबै तथ्य बाहिर आएको हो ।
खाली पेट लगातार ४ दिनसम्म पिउनुहोस् किसमिसको झोल, पाउनुहुनेछ चमत्कारिक फाइदा
नेपालमा को रोनाले देखायो शुभ सङ्केत, संक्र मित भन्दा निको हुने बढ्दै